Ciidamo Shabaab ka tirsan oo gaaray Deegaano ku dhaw Degmada Guriceel | Baydhabo Online
Ciidamo Shabaab ka tirsan oo gaaray Deegaano ku dhaw Degmada Guriceel
Wararka ka imaanaya Gobolka Galgaduud ee Bartamaha Somaliya ayaa sheegaya ciidamo ka tirsan Ururka Al Shabaab inay gaareen deegaano ku dhaw Degmada Guriceel ee Gobolkaasi.
Ciidamada Shabaabka oo la sheegay inay ka ambabaxeen Degmada Ceeldheer ee Gobolka Galgaduud, ayaa lagu soo waramayaa inay gaareen deegaanada kala ah Biyo Cadde iyo Warxoolo oo ku dhaw Degmada Guriceel.
Saraakiil ka tirsan ciidamada Dowladda Federalka Somaliya ee Gobolka Galgaduud, ayaa sheegay Shabaabka halkaasi tagay inay qorsheynayaan weerar inay ku qaadaan Magaalada Guriceel oo gacanta ay ku hayaan Maamulka Ahlu Sunna ee Gobolada Dhexe.
Waxaa la sheegayaa ciidamada Shabaabka oo aad u badan inay halkaasi isku aruursanayaan si ay u qaadaan weerarada qorsheysan ee ay ku doonayaan inay ku galaan Magaalada Guriceel.
Maamulka Ahlu Sunna ee Gobolada Dhexe weli kama aysan hadlin dhaq dhaqaaqan la sheegay Shabaabka inay ka wadaan deegaano hoostagga Degmada Guriceel ee Gobolka Galgaduud.
Guddoomiyaha Shabaab u qaabilsan Gobolka Galgaduud Sheekh Xasan Yacquub ayaa dhawaan sheegay Shabaabka inay qaadayaan dagaalo cusub oo ay ku wajahayaan deegaano ka tirsan Gobolka Galgaduud, isaga oo ugu baaqay dadka Galgaduud ku nool inay ka qayb qaataan dagaaladaasi.